IPhone Yangu Haingaridze! Heino Chikonzero Chaicho Nei. - Iphone
iphone 5s inobata isiri kushanda
maitiro ekuisa mudziyo mu dfu modhi
kutumira mameseji nema lasers
Fungidzira izvi: Uri kumirira yakakosha foni. Wakatarisa kaviri iPhone yako kuti uone kuti ringer iriko uye iwe wadzora vhoriyamu kusvika kumusoro. Kana foni ikarira, uri kuenda kuinzwa. Maminitsi mashanu apfuura uye iwe unotarisa pa iPhone yako, chete kuti uone iwe wapotsa kukosha kwakakosha! Usakanda foni yako pane kati. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura sei yako iPhone haichemi ndikuratidze chaizvo kuzvigadzirisa sei.
Kwidziridzo: Kana iwe uine iPhone 7, ino chinyorwa chinokushandira iwe - asi iwe ungangoda kutarisa chinyorwa changu chitsva chinonzi Yangu iPhone 7 Haizarira yeiyo iPhone 7-yakatarwa kufamba. Zvikasadaro, ramba uchiverenga!
Martha Aron akandikurudzira kunyora chinyorwa ichi paakabvunza, 'Yangu iPhone haina kurira pane zvese kufona, ndinosuwa mijenya yekufona uye zvinyorwa nekuda kweizvi. Unga ndibatsira here?' Martha, ndauya kuzokubatsira iwe nevamwe vese vatadza kupinda nemafone uye mameseji nekuti yavo iPhone haisi kurira.
Iwe Unogona Kuziva Izvi, Asi Tarisa Zvisinei…
Kana iwe uchiverenga ichi chinyorwa, iwe ungangove uchitoziva kuti kuti yako iPhone iridze, iyo Ringi / Chinyararire chinja parutivi rwe iPhone yako chinofanirwa kuiswa kurira.
Kana switch yacho ikakweverwa kuchiratidziri, ringer yako iPhone yakavhurwa. Kana switch yacho ikasundirwa kuseri kweiyo iPhone, yako iPhone iri pane chinyararire uye iwe uchaona tambo diki yeorenji padhuze neswitch. Iwe uchaona zvakare mutauri icon pane iyo iPhone inoratidzira kana iwe wabaya switch.
Paunenge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge wafona, Unogona kukwidza ringer vhoriyamu nekudzvanya vhoriyamu kumusoro bhatani parutivi rwe iPhone yako.
haigone kuwana gmail pane iphone
Iwe unogona zvakare kukwidza ringer vhoriyamu nekuvhura Zvirongwa -> Ruzha & Haptics . Dhonza chinotsvedza pasi Ringer Uye Alerts kurudyi kukwidza ringer vhoriyamu pane yako iPhone. Ukaenderera mberi uchidhonza chinotsvedza kuenda kurudyi, zvinowedzera kuti ringer ichave.
Kana yako iPhone isiri kuita chero ruzha zvachose , chinyorwa changu nezve zvekuita kana mutauri we iPhone amira kushanda ndichakuratidza maitiro ekugadzirisa iro dambudziko. Kana iwe watoita zvese izvi, ndosaka iPhone yako isiri kurira:
Heino Kugadziriswa: Dzima Usanetseke!
Kazhinji yenguva, chikonzero icho iPhone isiri kurira kune inouya mafoni ndeyekuti mushandisi akangoerekana avhura iyo Usakanganise chimiro mune Zvirongwa. Usakanganise kunyarara kufona, kunyevera, uye kuzivisa pane yako iPhone.
Ndinoziva Sei Kuti Kana Kusavhiringidza Kuvhurwa?
Nzira iri nyore yekuudza kana Usakanganise yakavhurwa ndeyekutarisa kumusoro kwekurudyi kona ye iPhone yako, kuruboshwe chete kwebhatiri icon. Kana Usikanganise ikabvumidzwa, iwe uchaona diki yemwedzi icon ipapo.
Kana iwe uchida kudhiza zvakadzika mukati Usakanganise uye kumisikidza otomatiki chirongwa, semuenzaniso, musoro ku Zvirongwa -> Usakanganise kuti uone zvese zvaunogona kuwana kwauri.
Ndoita Sei Kudzima Usakanganise?
Kubvira Apple yaburitsa iOS 7, zvave zviri nyore kutendeuka Usakanganise kuvhura uye kudzima. Rova zvakasimba kumusoro kubva pasi kwako iPhone sikirini kuvhura Control Center. Tinya iyo icon yemwedzi kuti usadzime kana kudzima Usakanganisa. Ndizvo!
Izvi zvinogona kusiyaniswa neshanduro dzakasiyana dzeIOS. Kana iwe uine iPhone X kana nyowani, vhura Control Center nekutsvaira pasi kubva kumusoro kwekurudyi kona yekona chidzitiro.
Iwe unogona zvakare kudzima Usakanganisa nekuenda ku Zvirongwa -> Usakanganise uye kudzima switch iripedyo ne Usakanganisa . Uchaziva kuti Usakanganise yadzimwa kana switch irichena.
Dzima 'Kunyarara Vasina Kuzivikanwa Vanofona'
Chimwe chikonzero nei uine dambudziko rekurira kwe iPhone kungave nekuti yako vharidzira vasingazivikanwe vanodana ficha yakavhurwa. Ichi chimiro chakanakira kumisa telemarketer uye robocalls munzira dzawo, asi zvinosuwisa kuti zvinosefa zvakare vamwe vanhu vaunonyatsoda kutaura navo.
Kuti udzime izvi, musoro pamusoro pa Zvirongwa -> Runhare wobva wadzima Kunyarara Vasingazive Vanodaidza. Paunenge iwe waita izvo, yako foni inokwanisa kukwanisa kurira zvakare kana mumwe munhu asiri mune vako vokukurukura akaedza kukusheedza iwe.
Ko Kana yangu iPhone Zvakadaro Hazviridze?
Ini ndagamuchira akati wandei makomendi kubva kuvaverengi vakatora ese mazano uye avo maPhones achiri kurira. Kana iwe wakazviita kusvika pano uye yako iPhone isiri kurira, pane mukana wakanaka iwe unogona kunge uine dambudziko rehardware.
Kazhinji nguva, apo gunk kana mvura inopinda mune imwe yemachiteshi (sengeyehedhifoni jack kana mheni / chinongedzo chedoko), yako iPhone anofunga pane chimwe chinhu chakabatanidzwa mukati maro, apo zviripo pasina. Chinyorwa changu nezve maitiro ekugadzirisa iyo iPhone yakanamatira mune headphone modhi inotsanangura kuti sei izvozvo zvichiitika uye kuti ungagadzirisa sei dambudziko.
tsvaga iphone yangu
Ipfuti refu, asi iwe unogona kutora antistatic brashi (kana bhurashi rezino iwe rausina kumboshandisa) uye edza kukwiza gunk kubva kune yako headphone jack kana mheni / dock yekubatanidza chiteshi. Antistatic brushes inobatsira pakuchenesa marudzi ese emagetsi, uye iwe unogona tora matatu-pack paAmazon nemari isingasviki $ 5.
Kana iwe uchibudirira, nyaya yacho inofanira kuzvigadzirisa pachayo. Nehurombo, yakawanda yenguva iyo kukuvara kwatoitwa kare. Chimwe chinhu chakapfupikiswa mukati me iPhone yako, saka mhinduro chete ndeyekushanyira Apple Store yako yemuno kana kushandisa mail-mune sarudzo pa Webhusaiti yekutsigira Apple kuita kuti yako iPhone igadziriswe.
Kugadzira Apple Store kunogona kudhura. Kana iwe uchitsvaga sarudzo isingadhuri, ini ndinokurudzira Pulse , kambani yekugadzirisa iyo ichatumira nyanzvi inosimbiswa kwauri ndiani anogona kusangana newe uye kugadzirisa yako iPhone mukati meawa.
Iye zvino inogona kunge iri nguva yakanaka yekukwidziridza yako iPhone. Kugadziridza kunogona kudhura, kunyanya kana chinhu chimwe chete chisina kunaka ne iPhone yako. Panzvimbo pekushandisa mazana emadhora kugadzirisa, unogona kushandisa mari iyoyo kutenga foni nyowani. Tarisa UpPhone's nhare yekuenzanisa nhare kuwana chikuru pane imwe iPhone nyowani!
Usakanganise ndeimwe yeaya makuru maficha anouya anobatsira kana iwe uchiziva kuishandisa, asi zvinogona kuve zvinokanganisa chaizvo kana usinga. Kuna Martha nevamwe vese vapotsa mafoni akakosha kana kudaidzira 'Yangu iPhone haichare!' pamunhu asina mhaka, ndinovimba chinyorwa ichi chine iwe kugadzirisa yako yakanyarara iPhone dambudziko. Kana iwe uine yekutevera-mibvunzo kana zvimwe zviitiko zvekugovana, uzviise muchikamu chemashoko pazasi. Ndinotarisira kunzwa kubva kwauri!